China High tembiricha guruva vhururu bhokisi bhokisi Kugadzira uye Fekiti | Zhengyuan
Zvinotarisirwa kucheneswa gasi
1. Yakanyanya kupisa flue gasi kuchenesa tekinoroji
Yakakwira-tembiricha yeflue gasi tsvina kupisa kushandiswa uye yakakwirira-tembiricha gasi kuchenesa uye kudzorera zvakakosha matanho ekuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Tichifunga nezvehunhu hwayo pamwe nematambudziko ekutonga, kambani yedu ine nyanzvi dzakaita mukurapa kwekupisa tembiricha- sosi munzvimbo dzemaindasitiri nemakiromita. Iyo yakagadzira yakakwirira-inoshanda yakakwirira-tembiricha guruva vanounganidza vane yakakwirira-tembiricha gasi mafirita seyakaipisisa tekinoroji. Izvo hazvitsvage kumanikidzwa kutonhorera uye zvinoshambidza guruva zvakananga. Iyo mhinduro yakanaka kune zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi nekuda kwekuderera kupisa tembiricha uye kupisa kwakanyanya, zviri nyore "kupisa bhegi", mushure mekutonhora, tembiricha yakanyanya kuderera, zvimwe zvinhu zvinonzvera uye nekuisa hombodo, iyo yekudzosera kufema yekuita zvekare. haina kunaka, kugona kwefaira nekushanda kwakashata, uye iyo yefaira inonamatira Zvakaoma kuturika uye nezvimwe zvinetso, zvinosanganisira matambudziko efaificha pasi pemamiriro ekunze ekupisa uye anti-static kuunganidza uye kuputika-chiratidzo mamiriro. Mumakore achangopfuura, yakaita huwandu hwevheni uye kiln guruva yekudzora mapurojemji mune simbi, makemikari indasitiri, zvekuvakisa uye mamwe maindasitiri.
Chechipiri, zvakanaka zvinobatsira zvekupisa guruva muunganidzi
Kupisa kwakanyanya kupikisa
Iyo yepamusoro inoshanda yekushisa yekudziya huru guruva muunganidzi anogona kusvika 800 ℃. Kujaira kukwira kumusoro-tembiricha kufefetera kunowanzogadzirwa neNomex zvinhu. Iyo yepamusoro yekudzivirira inopokana ndeye 280 ℃ chete. Kupisa kwakanyanya kuchaita kuti bhegi remhepo riorere zvakanyanya, izvo zvichizokonzeresa uye kupisa. Kana tembiricha yakadzikira kupfuura 250 ° C, hurongwa hukuru hwekudziya hunofanira kuwedzerwa. Kana tembiricha yaderedzwa, simba rekushisa rese rapererwa uye iyo polymer oiri yekudziya mvura mune glue flue yakaparadzaniswa kunze nepesita, izvo zvinoita kuti midziyo yekubvisa guruva irege kushanda. Naizvozvo, muunganidzi weguruva yakakwirira ndiye sarudzo yakanakisa yekuchenesa yakadzika-tembiricha flue gasi, uye haizopfuuri nekuremara pasi pemamiriro ekunze ekushisa kuve nechokwadi chekushanda kwakasimba kweiyo guruva rekubvisa system.
inogara kwenguva refu
Iyo yefaira chinhu cheidzi yepamusoro temburesa guruva rinogadzirwa neakasiyana sintered simbi zvinhu uye ane yakanakira kupesana kuramba. Naizvozvo, mumamiriro ezvinhu akajairika, hupenyu hwechigadzirwa hunogona kusvika 3 kusvika mashanu makore, ayo ari mana kana matanhatu ehupenyu hwevhisi bhegi.
Yakanyanya kufefetera kunyatso Kunyangwe iri basa rinoshanda kana yekuzvimiririra yekuyedza, chero bedzi yakagadzirwa nenzira kwayo uye michina inotsigira yakagadzirwa-zvakanaka, gurusvusvu guruva risingasviki rinogona kungokwanirisa zvinodiwa zvekuchenesa izvo zvinogona kuwanikwa neyakajairwa mabhegi mafirita. asi zvakare sangana nezvinodiwa izvo zvisingakwanisike neanenge aripo mabheji Kuchenesa maitiro.
Yakanaka makemikari corrosion kuramba
Kunyangwe bhegi racho rakabatanidzwa, richabvisirwa, rinowanzo kukanganiswa neasidhi kana alkali corrosion kana hydrolysis; uye kana bhegi riiswa, rinoda kugadziriswa nehombodo shato, uye keel inogadzirwa nesimbi zvinhu, zvinogadziriswa nyore. Iwo akanyanya-tembiricha guruva anounganidza anozvitsigira, haadi mapfupa, anokwanisa kuchengetedza yakanaka yemakemikari kugadzikana munzvimbo dzakawanda asidhi nem alkali, uye ine yakakwirira corrosion kuramba.
Kutenderera kwekuchenesa kwemucheka wemucheka kunoonekwa nekuita kwechimiro chekudzoreredza mhepo kuyerera mukati mezvinhu, izvo zvakananga kuzunza guruva repasi. Nekuda kwekukakavadzana pakati pemucheka nesimbi bracket, kuramba uchitambanudza nekurova kunogona kukonzeresa kukuvara kwemachira. Iyo firita inoshandisa iyo inodzosera mhepo kuyerera pachinzvimbo cheMuchina vibration yejira jira rekuita kuti uwane chinangwa chekuzvarwa patsva. Kuenzaniswa nehombodo yefaira, kunyanya pasi pekupisa kwakanyanya, hupenyu hwekushumirwa hwepamusoro tembureti guruva rinounganidza zvakanyanya.
Yepamusoro tembiricha yekudziya giraidhi ndiyo musimboti wegurukota rekuunganidza. Iyo ine yakanaka yakanyanya kupisa kupisa kudzika kupokana, yakanakisa kudzosera kumashure basa, yakakwirira yekuvhura danho inotsikisa diki yekutanga kudzvinyirira kudonha, yakakwirira yakafetwa gasi kuyerera muyero, chimiro chakasimba chinoita kuti iite nehupenyu hwakareba hwehupenyu uye humwe hunhu.
Kubudirira kwehupfumi hwehupfumi
Mabhegi eguruva anowanzove mapfupi ehupenyu, anodhura uye anodhura ekutsigira michina, kushanda kwakanyanya uye nekugadzirisa matanho, ekuchengetedza masango uye zvimwe zvikonzero, zvichikonzera mutengo wakakwira wekushandisa mabhegi guruva vanounganidza. Izvo zvakanakira yekushisa yepamusoro guruva muunganidzi wemitumbi, zvishandiso zviri nyore, hupenyu hwakareba, hapana chengetedzo, nezvimwewo, ita mutengo wakazara wekubvisa guruva zvakaderera zvakanyanya kupfuura bhegi remhando guruva rekubvisa michina.
Yepfuura: Sintered mesh filter